एक मात्र। प्रति प्रयोगकर्ताको प्रसारण एकाधिक खाताहरूलाई अनुमति छैन। कृपया यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्ना सबै उपकरणहरूमा एउटा खाता मात्र प्रयोग गरीरहनुभएको छ बहु खाताहरूको लागि फ्ल्याग हुनबाट बच्न।
क्यामेरामा सेक्स, डिभ्यान्ट यौन कार्यहरू (कठोर BDSM, zoophilia, pedophilia), आत्महत्या र लागूपदार्थ प्रयोगको प्रचार कडा निषेधित छ। यी नियमहरूको उल्ल्घनले प्रशासनले तुरून्त रोक्दछ।
किन म «हात तपाइँको हात» चिन्ह देख्छु? म केहि गलत गर्दैछु?
तपाईं केहि गलत गर्दै हुनुहुन्न। हामी अनौंठो सामग्री भएकोमा जिद्दी गर्दछौं र यो सरल तरंगले सुनिश्चित गर्दछ कि हाम्रा प्रसारकहरूले बट्स, रिप्ले र अन्य तेस्रो पार्टी रेकर्डि। प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
पैसा कमाउनको लागि आफ्नै प्रसारण रेकर्ड गर्नुहोस् जब तपाईं च्याट रूममा हुनुहुन्न। मुख्य मेनूमा रेकर्डि। स्विच गर्नुहोस्। रेकर्ड गरिएको प्रसारणहरू तपाईंको च्याट रूममा फेला पार्न सकिन्छ।
केहि नयाँ ब्रान्ड कोसिस गर्नुहोस्, तपाईंको सीप देखाउनुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको दर्शकहरूसँग च्याट गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्ट्रिममा विवरण थप्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई सार्वजनिक च्याट कोठामा आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै लोकप्रिय स्ट्रिमहरू स्वचालित रूपमा उच्च क्रमबद्ध हुन्छन् र अधिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछन्।
यस समयमा तपाई बिटकॉइन वालेट वा Yandex.Money प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइल फोनबाट प्रसारण गर्न सम्भव छ?